SOMTEL oo Abaal-marin Ku Guddoonsiisay Cayaartoyga Gobolka HAWD Xaflad loogu sameeyay Balligubadle | Araweelo News Network (Archive) -
SOMTEL oo Abaal-marin Ku Guddoonsiisay Cayaartoyga Gobolka HAWD Xaflad loogu sameeyay Balligubadle
Balligubadle(ANN) Shirkadda isgaadhsiinta waddaniga ah ee SOMTEL ayaa abaalmarin-lacageed guddoonsiiyay xulalka kubbadda cagta iyo kolayga ee Gobolka Hawd, iyada oo ballanqaadyo yididiilo lehna u samaysay dadweynaha deegaanka Balligubadle.Ciyaartoyga Gobolka Hawd oo maanta
dib ugu laabtay xarunta gobolka Hawd ee Balligubadle, ayaa munaasibad soo-dhoweyn ah oo loogu sameeyay halkaas, waxa hadal ka jeediyay Md. Cabdinnaasir Cumar Cilmi oo ku hadlayay afka shirkadda isgaadhsiinta ee SOMTEL, isaga oo dhiirrigelin u hidiyay naadiga kubbadda cagta iyo guud ahaan ba cayaaraha.
Md. Cabdinnaasir waxa uu faahfaahin ka bixiyay adeegyada ay shirkaddoodu bulshada u fidiso, isaga oo hoosta ka xarriiqay doorkii mudnaa ee ay ka qaateen hirgelintii iyo kobcintii cayaaraha gobollada dalka.
“Somtel waxay jirtay muddo sannad iyo wax yar ah, waxqabadkeedana maanta cidna loo sheegi maayo. Iminka qof-qof ayaad u taqaannaan cayaartoyga gobolka Hawd, markii horena maydaan garanayn wejiyadooda. Waxa arrintaas idiin suurtagelisay SOMTEL. Hablaha Talowadaag ee maanta iyaguna lacagta soo gaadhsiiyay cayaartoyga gobolka Hawd, halka ay ka arkeen waa Telefishannada, waxaana u suurtogelisay shirkadda SOMTEL” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Md. Cabdinnaasir Cumar.
Cabdinnaasir waxa uu ku faanay in shirkaddoodu kor u qaadday guud ahaan sumcadda Somaliland, kaddib markii ay toos u soo tebisay cayaaraha Gobollada Somaliland. “SOMTEL waxay u ballanqaadaysaa dadweynaha gobolka Hawd, inay sannadka cusub ay heli doonaan adeegyada kala duwan ee ay shirkadda SOMTEL bixiso, haddii ay tahay adeegga Teleefanka oo kii qiimaha jabnaa ah, adeegga Internet-ka, Adeegga Ila-soo-hadal oo ah in adiga oo Mobile-kaaga haysta dunida oo dhan lagaala soo hadli karo qiime jaban”.
Md. Haybe Aadan Cabdi oo isaguna ka tirsan masuuliyiinta suuqgeynta ee shirkadda SOMTEL ayaa xafladda ka hadlay, isaga oo sheegay in shirkaddiisu ugu talogashay inay cayaartoyga degmadooda ku soo guryo-noqday guddoonsiiso lacag abaal-marin ah oo dhan $ 1500 (Kun iyo shan boqol oo Doollar), si ay uga qaybqaataan dhiirrigelinta dhalinyarada.
Md. Haybe wuxuu lacagtaas guddoonsiiyay Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac) oo guddoomayay deeqaha ku socda cayaartoyga gobolka Hawd, isaga oo Xildhibaankuna lacagtaas ku wareejiyay cayaartoyga.
Haween taageersanaa xulka Gobolka Hawd ayaa iyaguna shahaado-sharafyo guddoonsiiyay maamulka Gobolka iyo shirkadda Isgaadhsiinta ee SOMTEL, iyaga oo ku xusay taageeradii ay u fidiyeen xulka gobolka.
Madashan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa iyaguna ka qayb-qaatay qaar ka mid ah fannaaniinta Somaliland, iyaga oo munaasibaddaas ku soo bandhigay heeso kala duwan oo ka warramaya kaalinta gobolka Hawd ee qarannimada dalka iyo dhiirrigelinta cayaaraha.